guska yar iyo siilka weyn | shumis.net
Home » galmada » guska yar iyo siilka weyn
guska yar iyo siilka weyn
Todobaadkiiba mar ayay Shabakada Hablaha Media Network HMN soo bandhigtaa barnaamijka taxanaha ah ee Weydii Dhaqtaka, kaas oo ka jawaaba su'aalaha la xiriira arrimaha caafimaadka, mashruucan ayaa waxaa iska kaashada Hablaha.com iyo dhaqaatiir aqoon durugsan u leh caafimaadka, kuwaas oo kaa haqaab tiri doona baahidaada caafimaad.
Su'aalaha aan u bandhigno dhaqaatiirta ayaa badanaa waxa ay ka yimaada bulshadeena ku taxan bogga Hablaha.com, iyagoo noo soo marsiiyo E-mail-keena ah hablahamedia@gmail.com. hadaba su'aashan soo socoto ayaa waxa ay ka timid mid ka mid ah Aqristayaasheena.
waxa ay kalababeyneysaa in ay guursato saxiibkeed waayo, waxa ay ogaatay in uu yahay nin Gus yar.
From : Anisa(26) ,Garoowe
Doctor waxaan Qorsheynayay in aan guursado sxbkeey. laakin gadaal ayaan waxaan ka ogaaday in sxbkeey ''Malab yarowgiisa'' uu aad u yar yahay, marka uu kacsadana cabirkiisu uu yahay 7cm, ma sameeyn karaa Gus cabirkiisu intaa yahay xiriir galmo? oo maxaan kala kulmi karaa oo dhibaato ah haddii aan guursado ninka Cabirkaasi Leh?
Dhab ahaantii, imisa ayuu noqon karaa cabirka ugu yar ee uu nin leeyahay kaas oo si wanaagsan u howl gali karo?
Dr Abdulkadir Omar
Dad badan ayaa waxa ay ku waalan yihiin weynida cabirka Gus. Dhab ahaantii, cabirka Guska ma aha wax saas muhiim u ah mar hadii laga soo gudbay marxalada martigelin hidde (stage genetic)koriimada Qofka caadiga ah.
Marxaladaasi ma aha oo kaliya mid ku saabsan oo kaliya Xubinta Taranka Ragga laakin, waa sidoo kale jira xuno kale oo ay ka mid yihiin sida Xiniinyaha iyo Qanjirada ku yaar Xubinta Taranka Ragga.
Halkaa Riix si aad u Aqriso Cabirada Xubinaha taranka Ragga
Cabirka guska sidoo kale waa wax aan sidaa aheyn, sidaa darteed, haddii uu cabirka saaxiibkeed sidaa yahay, dabcan waxa ay ku xirantay sax miyaa mise, kaba soo qaad in uu sidaa yahay, cabirka 7cm waa iska caadi waa wax normal ah.
Fiiro Gaar ah : hadaba haddii aad ka baqeyso su'aalaha in magacaaga lagu xuso ama loo isticmaalo qoraalka fadlan inoo soo raaci fariimaha aad noosoo direysaan si aan u siino magacyada Mr X (Lab) ama Miss Y (Dhadig) Mahadsanidiin.
Editor : Mr Canka
Title: guska yar iyo siilka weyn